Iimpawu ezintathu zeWands Tarot Card | Ukufundwa kweTarot - Iintsingiselo Zekhadi Letarot
Iintsingiselo ezintathu zeWands Tarot Card
Indoda yasemanzini i-capricorn isothandweni
Uluhlu lweZiqulatho eziThathu zeWands
Amatye amathathu aPhezulu
Amathathu amaWands aguquliwe
Ukubonakaliswa kwamanani kwiZihlabathi eziThathu
Buyela kwiSuit yeWands
Buyela kwiMinor Arcana
Buyela kuzo zonke iintsingiselo zeKhadi leTarot
Emva kokuba ufunde ukuthembela kubuchule bakho, isifuba sakho sidumba ngokuziqhenya njengoko ubukele iinqanawa zakho zisiya elangeni.
Akukho ntloni ekubonakaliseni kancinci. Emva kwayo yonke loo nto, izinto zikhangeleka zithembisa. Ngubani owaziyo ukuba zeziphi izinto ezizayo ezizayo okanye butyebile obu bunqanawa, izicwangciso zakho ezenziweyo, ziya kubuya mva?
Indoda ekwikhadi leetarthi ezintathu zeWands ikwangulomntu ukunye kwiZimbini zeWands. Ushiye ngasemva ukhuseleko lwebhotwe lakhe, ethengisa iimpahla zakhe zobukhosi kwi-toga yomfundi. Ngoku ukuba ithiyori sele yenziwe de kweyona nkcukacha zincinci, ixesha lifikile lokuseta izinto.
Isebenza njani loo nto kuye?
Njengoko unokuxela kubasebenzi abatyalwe emhlabeni kwiZintathu zeWands, isebenza kakuhle! Abasebenzi abasemva kwakhe babonisa ukuba izakhono zakhe zimzisile kwinqanaba apho abona ngokucacileyo umfanekiso omkhulu. Izinto zijongeka zilungile: Iinqanawa zakhe zihamba zinqumla kulwandle olucacileyo noluzolileyo lisiya kumazwe akude. Unokubabona nabo. Iintaba ezinde zibonisa ukuba zizele lithuba.
Ungqiyame ngomsebenzi omnye kwikhadi lesithathu le-Wands tarot, oko kuthetha ukuba izakhono zakhe zanele ukumxhasa-ngokoqobo! Kwaye abasebenzi basekhohlo bathembisa ukuba uya kuba ngcono nakwinto ayenzayo ngokuhamba kwexesha.
Ukuthetha ngexesha, ixesha lakhe lilungile! Ngeenkwenkwezi , Amakhadi amathathu etarot eWands ahambelana nelanga kwi IiAries . Lo mzimba wasezulwini wenzeka ukuba ungene kwi-Aries ngo-Matshi 21. Lo ngumhla wokuqala wentwasahlobo, ixesha elihle leziqalo ezintsha.
Ixesha lokubila phezu kwezo ncwadi kubhotile, engwevu yasebusika inqaba lifikile esiphelweni. Wamkelekile kwisikolo sobomi!
Ukuza kuthi ga ngoku, udlula ngemibala ephaphazelayo!
Abanye bayaqaphela, kwaye bazimisele ukumamela nasiphi na isithembiso esisengqiqweni onokuthi usibeke etafileni.
Ethe tye ezintathu zeWands Tarot Card
Xa ezi zintathu zeeWands zibonakala zimile kufundo lwe-tarot, iintsingiselo zalo zithetha ngokuzingca ngamandla akho, ukufunda ngamava, kunye nokufumana amathuba amatsha.
Ukuza kwamandla akho kukunike ubulumko obungenakufumaneka ezincwadini. Amalungelo ambalwa okuqhayisa alungile nangona kunjalo, ezi zintathu zeeWands zikwasisikhumbuzo esivela kuMoya sokugcina i-ego yakho ijonge. Ikratshi elincinci lihamba indlela ende.
Ikhadi lesithathu leWands tarot linokukhomba umntu ongachasanga neengxaki, abe yimpumelelo nangona eswele imfundo esesikweni. Mhlawumbi oku kukulahla phezulu okanye kwikholeji oye waba yimpumelelo yeshishini.
Ngokubanzi, ukuphuma esikolweni kuyazenza nzima izinto, kodwa iingxaki azikaze ziyeke abantu abangaqhelekanga. Umzekelo, uWalt Disney washiya isikolo xa wayeneminyaka elishumi elinesithandathu kuphela.
imibala yeeuras kunye nokuba bathetha ntoni
Amakhadi amathathu e-Wands tarot ziindaba ezilungileyo kakhulu kulo naliphi na ishishini okanye imeko yomsebenzi!
Ezo zinto uziqhubayo uzithumileyo zivelisa izicelo zodliwanondlebe. Ngenxa yokuba iinjongo zakho zomsebenzi zichazwe ngokucacileyo, uya kuba nakho ukukhetha ngobulumko.
Igama liqala ukuphuma malunga neshishini lakho. Okubaluleke ngakumbi, abanye beva izinto ezintle ngawe. Ewe, abathengi abatsha kunye nabathengi bakufuphi. Yintoni ebalulekileyo ngokulinganayo kukuba abanye banomdla wokusebenzisana nawe - okanye bakunike ingcebiso.
Iziganeko zamva nje zibonisa ukuba usinge kwicala elifanelekileyo. Imizamo yakho izisa iziqhamo zokuqala zempumelelo. Ngenxa yokuba unombono ocacileyo womfanekiso uphela, unokuxela ukuba izinto zihamba kakuhle kwishedyuli.
Ukuba awutshatanga kwaye ujonge, ukulinda kuya kugqitywa kungekudala. Ngapha koko, uya kuba nakho ukukhetha kumaqabane amaninzi anokubakho.
Kodwa ikhadi lesithathu leWands tarot liyinkohliso, ukuba sele ulwalamano. Amathathu eWands acebisa ukuba omnye wenu unokuba nesifo se-eye wandering syndrome. Ukuba liqabane lakho, sele uyazi ukuba. Iindaba ezimnandi zezokuba akaphumi ngokwasemzimbeni kulwalamano - kwaye akananjongo zokwenza njalo.
Ukuba nguwe, ulumke ngcono ukuya kwinto yokuba iqabane lakho liyayazi into oyenzayo. Kuyinyani, awuthethi nto, kodwa enye ebalulekileyo ibuhlungu. Ukuba awukuyeki oku kungekudala, unokufumanisa ukuba ukulala kwiveranda engaphambili ngexesha lesiphango akunamnandi kwaphela, kwaphela.
Iintsingiselo ezintathu zeWands eziGuquliweyo zeKhadi leTarot
Xa ikhadi lesithathu leWands selibuyisiwe, luphawu lokuba uMhlaba uphela uza kubeka ikhefu kuyo yonke into.
Uphuhliso lwamva nje luyacotha. Banokuguba bame ngokugqibeleleyo, kwaye oku kungayeka okwethutyana okanye okusisigxina.
Thatha inyathelo ubuye umva kwaye ubonakalise. Umoya wakho wokudana ungathetheleleka. Kwelinye icala okwenzekayo kunokuba yintsikelelo yokuzifihla.
Ukuba oku kuyingxaki kuphuhliso lwakho lobuqu, amathuba okuba uyilibale into. Usenokungaqhubeli phambili njengokuba ubucinga. Amandla akho aphezulu abiza kwitshekhi yokwenyani.
Isithathu sekhadi leWands elibuyiselwe umva luphawu lokuba lixesha lokuba uthembeke ngokupheleleyo kuwe. Ngaba unabo ubuchule bokuzikhohlisa? Ukuba kunjalo, uyabizwa ukuba unyange lo mfuziselo uyonakalisayo. Ukuba uthe wawuthobela umnxeba wokuba 'uvuse' (ukukhula komntu okanye ukukhula ngokwasemoyeni) kuphela kwendlela yokunyuka.
Akukho buqhetseba okanye iindlela ezimfutshane ezivunyelweyo.
Into ebalulekileyo kukuguqula le miqobo ibe ngamathuba okufunda.
Kuyinyani, ayizizo zonke izithintelo ezenziwe nguwe, kwaye ayizizo zonke iimeko zokulingwa ezinokufakwa kwesilivere. Ngamanye amaxesha, izinto azisebenzi nje.
Ikhadi lesithathu leWands tarot lisenokukuxelela ukuba ubudlelwane okanye ubuhlobo buya kuphela. Akukho mntu unetyala. Kudala nisanda ukwahlukana. Zixabise iinkumbulo ezintle, ziphelise izinto zicocekile, kwaye musa ukubhenela ekuphindiseleni.
Ngamanye amaxesha, ikhadi lesithathu leWands tarot likwabonisa ukuba ukulungele ukubuyela emhlabeni emva kwexesha lokungena ngaphakathi.
virgo umfazi kunye nepisces ukuhambelana kwendoda
Imbalelwano emithathu yeWands Tarot Card yokuNxibelelana kweMetaphysical:
Isiqalelo : Umlilo
Iimpawu zeZodiac : IiAries , Leo & Isagittarius
Ukuphilisa Amakristali : Carnelian
Amathathu amaKhadi eWands kunye neTarot Numerology
Ngokubambisene, i Inombolo 3 Inxulunyaniswa noSaturn kwimeko yakhe yomdali. Ngokwesiko Amanani , Abathathu bahambelana neJupiter esikelela impumelelo ngempumelelo engaphezulu. Amandla kunye ne-gusto ye-Suit of Wands ibhenela ngakumbi kwicala lesisa lala mandla makhulu.
Funda ngakumbi malunga nobugcisa obungcwele bokubhula Amanani . Sebenzisa eyethu Ukubala ngamanani ukufumana into yakho Indlela yoBomi , Umphefumlo , Ubuntu bakho , Ukuhambelana kwaye Amanani omsebenzi kwaye zinokunceda njani ukuphucula zonke iinkalo zobomi bakho!
iiplanethi kwindlela yethu yelanga ngokulandelelana
isagittarius indoda ethandana nebhinqa le-sagittarius
Ngaba i-aquarius kunye ne-aquarius ziyavana
umhlaza indoda ebhedini kunye umfazi virgo
Leo indoda kunye nomtshato womfazi gemini